Iphrojekthi ye-Yunnan Xinping Sports Forest Park Football Fielding Lighting
Ikhwalithi yokukhanyisa iyinkomba ebalulekile yezinga lezinsiza zemidlalo. Ebholeni, ukukhanyiswa kwenkundla yezemidlalo kubaluleke kakhulu. Muva nje, i-UNIKE igcwalise ngempumelelo iXinping County Sports Forest Pa ...
Xiangtan Indoor Stadium Ukukhanyisa Ukulungiswa Kwephrojekthi
Muva nje, iphrojekthi yokulungiswa kokukhanyisa ukukhanyisa kweHunan Xiangtan Indoor Stadium iphasise ngempumelelo ukwamukelwa futhi yasetshenziswa ngokusemthethweni, okwaziwa kakhulu futhi kwaqinisekiswa ngamakhasimende. I-UNIKE inikeza isisombululo esiphelele sokukhanyisa iXiangtan Indoor Stad ...
YINI I-SMD LED?
Amadivayisi we-Surface Μount, ama-Diode akhanyisiwe we-Light I-SMD LED incane kakhulu futhi ilula i-chip efakwe ku-epoxy resin. Lokhu kunikeza ukukhanya okukhulu ngenkathi kugcinwa ukusetshenziswa kwamandla aphansi uma kuqhathaniswa nolunye uhlobo lwama-bulb (isb ...